Tucos si aad uga faa iideysato WhatsApp | Wararka IPhone
Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (1/2)
WhatsApp waa codsigaas joogtada ah, kaas oo ku jira qayb weyn oo ka mid ah saacadaha shaashadda ee inta badan isticmaalayaasha aqriya boggan. Sidaa darteed, WhatsApp waa barnaamijka ugu caansan ee farriimaha deg degga ah ee adduunka, sidaas darteed, barnaamijka guud ahaan waxaan ugu isticmaalnaa aaladahayaga. Sidaa darteed, way fiicantahay in la ogaado waxa ugu tayada wanaagsan ee aan ka faa'iideysan karno WhatsApp, in kastoo aysan badneyn, maadaama WhatsApp uu yahay codsi kooban oo fudud oo fudud oo aan laheyn howlo muuqda sida tartanka (Telegram ama Facebook Messenger), si kastaba ha noqotee, Khiyaanooyinka qaarkood haddii ay jiraan si loo helo waxqabad heer sare ah oo ku saabsan iPhone News waxaan rabnaa inaan kuu sheegno dhammaantiin, sidaa darteed midna ma seegin.
Ugu horreyntii, waa inaan xusuustaa in dadka isticmaala ay ka sii badan yihiin «Khubarada»Qaar badan oo ka mid ah khiyaamadaan ayaa horeyba loo ogaan doonaa, si kastaba ha noqotee marna ma dhaawaceyso inaad xasuusiso kuwa sida caadiga ah u isticmaalaya dalabka ama kuwa aan qandhadda fariin deg deg ah dusha dusha kaga oollin. Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa tabaha xiisaha leh ee aan ku cidhiidhinayo WhatsApp.
1 Shabakadda WhatsApp, u qaad WhatsApp-ka kombuyuutarkaaga
2 Kahortag sawirada WhatsApp in lagu keydiyo Roll Camera
3 Ka jawaab adigoon arjiga galin
4 U adeegso geesinimo, isaaq, iyo marinka wada-jirka xoog saaris
5 Si fudud u raadi xiriiriyeyaasha, multimedia ama dukumiintiyada wadahadalka
6 Ha iloobin inaad sameysid nuqulo kayd ah markaad aragto inay kugu habboon yihiin
Shabakadda WhatsApp, u qaad WhatsApp-ka kombuyuutarkaaga
WhatsApp Web waa mid been abuur ah oo nooca desktop-ka ah. Si ka duwan Telegram iyo codsiyo kale, kuwaas oo leh barnaamij u gaar ah ama barnaamij u gaar ah labada PC iyo Mac, marka laga hadlayo WhatsApp waxaan ka helnaa nooc ka mid ah macaamiisha websaydhka oo runtii aan mid ahayn, waa muraayad fudud oo taleefankayaga ah oo sidoo kale u adeegsanaya adeege ahaan, sidaas darteed wuxuu ku cuni doonaa inta batteriga ah ee heerka xogta inta ay socoto, laakiin wuxuu awood u yeelan doonaa inuu sameeyo khiyaanada in ka badan hal jeer, gaar ahaan xafiiska halka madaxku uusan fiirineynin. Xaaladda Mac OS waxaan haynaa codsiyo gaar ah, sida Hadal, in inkasta oo aysan xal ahayn, haddana waa iswaafajin layaableh.
Waxaan haysan doonaa qaybta Websaydhka WhatsApp oo si cad u muuqan doonta, waa inaan gujino "goobaha" gudaha WhatsApp waxaanan ku arki doonnaa WhatsApp Web mid ka mid safafka ugu horreeya Kaliya waa inaan iska baarnaa lambarka QR si aan u shaqeyno.
Kahortag sawirada WhatsApp in lagu keydiyo Roll Camera
Kulligeen waxaan ka mid nahay koox la yaab leh (marka loo eego dareenka Anglo-Saxon ee erayga) oo aan joojinaynin ku been abuurka fiidiyowyada iyo sawirrada ugu caansan. Dhibaatadu waxay tahay markaan u oggolaanno hooyo inay aragto sawirrada carruurteena ama wiilasha aan adeerka u nahay ee mobilka ku jira waxayna sidoo kale heshay aberis Tan awgeed, waxa ugu fiican ayaa ah in laga hortago iPhone-keena inuu ku keydiyo sawirada la soo dejiyey dusha sare, Goobaha Wadahadalka waxaan ka heleynaa shaqadan si aan u joojino.
Ka jawaab adigoon arjiga galin
Badanaa jawaabta waxay noqoneysaa wax la aqbali karo, sidaa darteed waxaan si toos ah uga jawaab celin karnaa mahadnaqida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ee WhatsApp. Ogeysiinta ayaan hoos u dhigeynaa haddii ay hadda u muuqatay ama dhanka bidix haddii ay ku taal xarunta ogeysiinta oo aan sii wadno jawaabta. Sidoo kale, qofna ha u sheegin, haddii aan isticmaalno qaabkan jawaab celinta ah looma calaamadeyn doono sida shilin buluug ah sheekooyinka intiisa kale, waxaad moodaa inaanan meesha joogin.
Isticmaal geesinimada, ah italic iyo ka gudubtay si loo xoojiyo
WhatsApp tan iyo markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay waxay u oggolaaneysaa isticmaalka qoraalka hodanka ah, waa wax aad u fudud, kaliya waa inaan raacnaa tallaabooyinka waxaan ku muujineynaa maqaalkan laga bilaabo dhowr toddobaad ka hor. Qaateyaasha heysta arjiga ayaa cusbooneysiin doona waxay ku arki doonaan isbeddelada shaashadda, wax aad u xiiso badan oo la isku dayo in xoog la siiyo ama la isku fahmo ereyada qaarkood.
Si fudud u raadi xiriiriyeyaasha, multimedia ama dukumiintiyada wadahadalka
Marka, maqnaanshaha mashiinka raadinta wanaagsan (oo waliba leh), WhatsApp waxay ku dartay wadahadal kasta meel aan si dhakhso leh ugu tagi karno waxa ku jira. Thanks to qaybtani ma arki karno oo keliya sawirada iyo fiidiyowyada sidii hore, hadda waan heli karnaa isku xirkaas ee ah warka muhiimka ah ee saaxiibkeen na soo mariyey maalmo ka hor. Haddii aan gujino magaca kooxda ama xiriirka, macluumaadka wada sheekaysiga ayaa furmaya, waxaanan aadi doonnaa "multimedia, links and docs" si aan u wada aragno.
Ha iloobin inaad sameysid nuqulo kayd ah markaad aragto inay kugu habboon yihiin
Ma fududaan karin, wada sheekaysigeennu mar dambe kuma koobna qalabka oo keliya, laakiin sidoo kale iCloud, markaa waan soo celin karnaa wadahadalka markasta oo aan rabno. In Settings> Chats> Chats Nuqul Waan arki karnaa goormay ahayd markii ugu dambeysay ee aan mid sameysano, dooro inta jeer ee aan dooneyno in la sameeyo iyo haddii aan rabno in ay sidoo kale ku darto fiidiyowyada (taas oo aan ku darin iyaga asal ahaan).
Maalmo yar gudahood waxaan kuu soo qaadan doonaa qaybtii labaad si aan kuu siino xeelado kale oo badan oo WhatsApp ah. Haddii aad taqaanid mid gaar ah oo aad rabto inaad la wadaagto, si xor ah ugu dhaaf sanduuqa faallooyinka. Sida khiyaano dheeraad ah, halkan waxaan ku sharaxeynaa sida ku cadaadi fiidiyowyada Whatsapp oo sidaas ayaad u soo diri kartaa fiidiyowyo dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Khiyaanooyinka si aad uga faa'iideysato WhatsApp-ka ku jira iPhone-kaaga (1/2)
Jawaabta degdega ah ee whatsapp nooca ugu yar ee iOS u baahan yahay? Waxaan hayaa 9.0.2 nooca ugu dambeeya ee Whatsapp mana sameyn karo.
Ku jawaab gaxilongas
khiyaano aad u qabow ayaa ah in la isticmaalo raadinta tooshka si loo raadiyo xiriiro
Hel jaban joomatari Wars 3: Cabirka maanta ku lug leh